Karazan-bakteria inona no vonoin'ny ampicillin? - BALLYA
Posted on March 4, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny ampicillin?
Ampiasaina ny ampicillin
Inona ny Sulbactam??
Ny andraikitry ny sulbactam ampicillin
Vokatry ny ampicillin
Ampicillin dia beta lactam antibiotika afaka mitsabo aretina mikraoba maro. Ny famantarana dia misy aretin'ny taovam-pisefoana, aretin-kibo, meningite, salmonella, ary endocarditis. Azo ampiasaina ihany koa izy io hisorohana ny aretin'ny streptococcal group B amin'ny zaza vao teraka, ary azo tsaboina amin'ny tsindrona am-bava, intramuskular ary intravenous. Ampicillin dia hita voalohany tamin'ny 1961, ary izy dia voatanisa ao amin'ny lisitry ny fanafody ilaina indrindra an'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ary iray amin'ireo zava-mahadomelina tena ilaina amin'ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka.
Tamin'ny 27 Oktobra 2017, ny lisitry ny carcinogens navoakan'ny International Agency for Research on Cancer of the World Health Organization dia natambatra ho loharanom-baovao. Ampicillin dia tafiditra ao amin'ny lisitry ny karazan-karsinogen telo.
Ampicillin dia spectrum broad-semi synthetic penisilinina. Ny fomba fiasa ampicillin dia ny fisorohana ny fampifangaroana ny rindrin'ny sela bakteria, noho izany dia tsy vitan'ny hoe manakana ny fiparitahany izy io, fa mamono mivantana koa ireo bakteria. Ny vokany amin'ny bakteria miabo gram dia mitovy amin'ny an'ny penicillin. Izy io dia misy fiatraikany tsara kokoa amin'ny Streptococcus viridans sy Enterococcus, saingy misy vokany ratsy amin'ny bakteria hafa.
Tsy misy fiatraikany amin'ny Staphylococcus aureus mahazaka penicillin. Anisan'ireo bakteria miiba-gram, Neisseria gonorrhoeae, meningococcus, gripa gripa, bacillus pertussis, Escherichia coli, typhoid ary paratyphoid bacillus, baccus d'ententera, Proteus mirabilis, Brucella, sns. Dia mora tohina. Ny pneoniae, ny Proteus miabo tsara, ary ny Pseudomonas aeruginosa dia tsy mora tohina amin'ity vokatra ity.
Ampicillin sy amoxicillin dia antibiotika, saingy tsy mitovy ny fanasokajiana azy. Ampicillin dia afaka mitsabo aretin-bakteria isan-karazany. Matetika izy io dia ampiasaina amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny aretin-tsaina. Azo ampiasaina ihany koa izy io hitsaboana ireo fihetsika sasany ateraky ny endocarditis sy ny salmonella. Amoxicillin dia ampiasaina amin'ny sterilization, ary ny fahafahany miditra amin'ny rindrin'ny sela dia matanjaka tokoa, noho izany dia be mpampiasa ny fanomanana amin'izao fotoana izao, ao anatin'izany ny kapsily sy ny takelaka, ary koa ny granules.
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny amoxicillin ary ampicillin dia ny molekiola amôxicillin dia manana vondrona hydroxyl iray hafa noho ny ampicillin. Io fahasamihafana io no mampihena be ny lipophilicity amoxicillin, ary noho izany dia nohatsaraina ny biôlika amam-bava amôxicillin raha oharina amin'ny ampicillin.
Noho izany, raha omena ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona ny fatra mitovy amôxicillin sy ampicilina dia avo kokoa noho ny ampicillin ny bioavailability of amoxicillin. Ohatra, omeo fatra amôxicillin sy ampicilina mitovy am-bava ihany amin'ny alika, ny bioavailability of ampicilina dia manodidina ny 30%, raha ny bioavailability amoxicillin kosa dia 65%.
Amoxicillin dia antibiotika penicillin, manana fiasan'ny bakteria tsara manohitra ny Streptococcus pneumoniae, Streptococcus hemolyticus, Staphylococcus non-penicillinase, Enterococcus faecalis ary coco-positive aerobic gram-positive hafa koa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella Bacteria, ghaérobia -bakteria bitika izay tsy mamokatra beta lactamase sy Helicobacter pylori. Amoxicillin dia mitarika vokan'ny bakteria amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fampifangaroana ny rindrin'ny sela bakteria, mamela ny bakteria ho lasa spheroid haingana ary mamoaka sy mamaky.
Ny kapsily ampicillin dia miorina tsara amin'ny asidra gastric ary mifoka tsara am-bava. Ampicillin dia ampiasaina indrindra amin'ny rafi-pivily, ny taovam-pisefoana, ny lalan'ny biliary, ny tsinay ary ny meningite, ny endocarditis ateraky ny bakteria mora tohina; azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny tazo typhoid sy tazo paratyphoid koa izy; azo ampiasaina amin'ny tsinay sy lalan-drà taovam-pisefoana koa io.
Ny famantarana ny ampicilina sy amoxicillin dia mitovy, ary ny vokatra fitsaboana ny mikraoba isan-karazany dia tsara ihany koa, saingy misy ny tsy fitoviana kely. Tsy tokony ho sarotra amin'ny marary ny misafidy, rehefa mila mihinana an'ity karazana fanafody ity ianao dia hanampy anao ny dokotera hisafidy fanafody mety kokoa arakaraka ny toe-pahasalamanao, ary ny vokatra azo avy amin'ny fitsaboana dia azo atao raha mbola ampiasaina ny fanafody marina.
Ity vokatra ity dia ampiasaina indrindra amin'ny rafi-pivily, ny taovam-pisefoana, ny lalan'ny biliary, ny tsinay, ny meningite, ny endocarditis, sns.
Ny ampicilina dia tsy mandaitra kokoa noho ny penicillin manohitra ny ankamaroan'ny bakteria Gram-positive. Saingy misy fiantraikany mahery vaika amin'ny ankamaroan'ny bakteria miiba amin'ny gram, toy ny Escherichia coli, Proteus, Salmonella, Haemophilus, Brucella ary Pasteurella, mitovy na somary matanjaka noho ny chloramphenicol ary tetracycline. Saingy ny vokatra misy poizina dia kely noho ny an'ny chloramphenicol sy ny tetracycline, ary tsy mandaitra amin'ny fanoherana Staphylococcus aureus sy Pseudomonas aeruginosa.
Ampicillin dia be mpampiasa amin'ny havokavokan'ny olombelona sy ny biby fiompy ary ny aretin-kibo vokatry ny bakteria mora tohina, ary ny tsimokaretina Chemicalbook nateraky ny bacilli gram-négatif, toy ny meningitis olombelona, ​​endocarditis, sns. foal, zanak'omby pnemonia, ary aretina Povastella bovis, pnemonia, mastitis, porcine pleurop pneumonia, pullorum, typhoid avia, sns.
Ny ampicillin dia mora tohina amin'ny fitsabahan'ny β-lactamase novokarin'ny bakteria ary simba vetivety, ka mampihena ny vokany. Amin'ny fampiharana ara-pahasalamana dia matetika ampiasaina miaraka amin'ny beta synthetic lactamase inhibitor-sulbactam mba hampitomboana ny fiatraikany synergistic, izay manatsara ny asany bakteria ary mampitombo ny fatran'ny bakteria. Ankoatr'izay, ny fitambaran'ny ampicillin sy aminoglycoside antibiotika koa dia misy fiatraikany synergistic, izay afaka manatsara ny efficacy.
3. Dosis Ampicillin
A. tsindrona Intramuscular
Ho an'ny olon-dehibe, 800,000 2 ka hatramin'ny 3 tapitrisa isan'andro, zaraina ho 4 ka hatramin'ny XNUMX fatra.
Ho an'ny ankizy, singa 25,000 / kg, notantanana indray mandeha isaky ny 12 ora.
Zaza vao teraka (fiterahana maharitra): isaky ny isaky ny lanjan'ny 50,000 unit / kg, indray mandeha isaky ny 12 ora amin'ny herinandro voalohany nahaterahana, indray mandeha isaky ny 8 ora ho an'ireo mihoatra ny herinandro, ary indray mandeha isaky ny 6 ora ho an'ny areti-mifindra mahery vaika.
B. Tsindrona intravenous (Mety amin'ny aretina mahery)
Ho an'ny olon-dehibe, singa 2 ka hatramin'ny 20 tapitrisa isan'andro, mizara roa ka hatramin'ny 2 mitete intravenous. Ny tahan'ny fitantanan-draharaham-panjakana dia tsy afaka mihoatra ny 4 unit isa-minitra.
Ho an'ny ankizy, 50,000 200,000 ka hatramin'ny 2 4 unit / kg isan'andro, nozaraina ho XNUMX ka hatramin'ny XNUMX mitete intravenous.
Ho an'ny zaza vao teraka (fiterahana maharitra): mitovy fatra amin'ny tsindrona intramuscular.
1. Inona ny Sulbactam??
Sulbactam dia mpanakan-tsoroka beta lactamase tsy azo ovaina, izay manakana ny lactamase nokapohin'ny bakteria Gram-positive sy ny ratsy (afa-tsy Pseudomonas aeruginosa). Ny fampiharana tokana dia mandaitra amin'ny aretin'ny peripheral Neisseria gonorrhoeae sy meningococcus; fitsaboana mitambatra sulbactam sy ampicillin, cefoperazone, piperacillin, mezlocillin ary bakteria saro-pady hafa ao amin'ny lalan-pisefoana, lalan-dra, uretra sy gynecology, ary kitron-kibo anatiny, hoditra sy tavy malemilemy, maso, sofina, orona ary tenda, taolana sy tonon-taolana aretina, ary koa sepsis, meningite, sns.
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra sulbactam novokarina tany Sina dia ampicillin / sulbactam sodium natambatra fanomanana (unasyn) amin'ny tsindrona intravenous na intramuscular.
Sulbactam dia manana fihetsiketsehan'ny bakteria malemy ary somary matanjaka noho izy asidra clavulanic. Rehefa ampiasaina irery dia tsy afaka mamono an'i Neisseria gonorrhoeae sy Acinetobacter fotsiny izy. Izy io dia misy fiatraikany mahery vaika amin'ny ankamaroan'ny lactamases beta novokarin'ny bakteria miabo tsara sy bakteria gram-ratsy, saingy tsy misy fiatraikany amin'ny lactamase beta vy. Ny fitambaran'ny sulbactam sy penisilinina or cephalosporine ny fanafody amin'ny ankapobeny dia misy fiantraikany lehibe amin'ny synergistic, izay manatsara be indrindra ny asan'ny bakteria amin'ny roa voalohany ary manitatra ny fihanaky ny bakteria.
Rehefa ampiasaina irery dia mahomby amin'ny areti-mifindra gonococcal sy meningococcal; sulbactam ampiarahina amin'ny ampicillin na ny cefoperazone dia afaka mitsabo ny lalan-taovam-pisefoana, ny urinary tract, ny fiterahana sy ny gynecology, ny lava-kibon'ny vavony, ny hoditra ary ny tavy malemilemy, ny maso, ny sofina, ny orona sy ny tenda ateraky ny bakteria saro-pady sy ny taolana sy ny aretin-taolana sy ny taolana, sepsis, meningite, sns.
2. Ny andraikitry ny sulbactam ampicillin
Ny sulbactam ampicillin dia mety amin'ny beta lactamase-mamokatra Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus, Escherichia coli sasany, Klebsiella ary Proteus mirabilis, Bacteroides fragilis, Acinetobacter, Enterococcus, sns., Izay nateraky ny hoditra aretina. Izy io dia mety indrindra amin'ny aretina mifangaro amin'ny aerobes sy bakteria anaerobika, indrindra ny aretin-kibo sy ny aretin-tratra.
Ity vokatra ity dia mandaitra ihany koa amin'ireo aretina voalaza etsy ambony nateraky ny bakteria mora ampicillin. Ity vokatra ity dia tsy mety amin'ny aretina ateraky ny Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter, Providencia, Enterobacter, Morgenella ary Serratia. Ny fiatraikany ratsy dia misy fanaintainana eo amin'ny toerana fanindronana, fivontosan'ny hoditra, fivalanana indraindray, maloiloy ary fitomboan'ny ALT sy AST.
Vokatry ny ampicillin-effects
Ny fiatraikany ratsy amin'ny ampicillin dia mitovy amin'ny penicillin. Ny fanehoan-kevitra momba ny allergika dia mahazatra toy ny aretin-koditra sy urticaria, izay misy tranga lehibe kokoa noho ny hafa penisilinina. Indraindray, tsy fahita firy ny fihenjanana anaphylactic, neutropenia, ary thrombositopenia, ary tsy fahita ny fiasan'ny aty tsy fahita, ary ny soritr'aretina neurolojika toy ny hahetsiketsika dia mety hitranga aorian'ny fitantanana intravena be fatra.
Ny fiatraikany ratsy dia fahita matetika amin'ny fanehoan-kevitra mahazaka. Anisan'izany, ny maimaika no fahita indrindra, miaraka amin'ny taha 3.1% ～ 18%. Matetika dia miseho 7 ka hatramin'ny 12 andro aorian'ny fanombohan'ny fitsaboana, miseho ho urticaria na maimaika maculopapular. Ny trangan'ny aretin-koditra amin'ny tsindrona dia avo kokoa noho ny fitantanana am-bava. Ny olona tsy ampy renal dia voan'ny aretin-koditra be. Misy tatitra momba ny dermatitis exfoliative. Ary nisy nitatitra fa tranga 8 amin'ny dermatitis mahazaka dia misy ambaratongam-fahasimban'ny atiny, izay tokony horaisina ho toy ny fahasimbana amin'ny atiny mahazaka.
Ny aretin-koditra no fiatraikany mahazatra indrindra, izay matetika mitranga 5 andro aorian'ny fanafody, miseho ho urticaria na maimaika maculopapular. Ny voalohany dia fivontosan'ny fanehoan-kevitra mahazaka penicillin, ary ity farany manana ny mampiavaka azy amin'ny ampicillin. Ny tranga fitantanan-tsindrona dia avo kokoa noho ny fitantanana am-bava.
Indraindray, ny granulosit sy ny trombositopenia dia mety hitranga aorian'ny fitsaboana.
Ny nephritis interstitial dia mety hitranga amin'ny marary vitsivitsy aorian'ny fitsaboana.
Marary vitsivitsy no manana tsy fetezan'ny aty miasa aorian'ny fitsaboana.
Ny fatra lehibe amin'ny fitantanana intravenous dia mety miteraka soritr'aretin'ny neurotoxic toy ny haintona. Ny zazakely dia mety hiaina tsindry intracranial mitombo aorian'ny fanafody, miseho ho bregma bulge.
Enteritis mifandraika amin'ny ampicillin dia tsy fahita firy.
Raha mivalana maharitra maharitra mandritra ny fanafody dia mety ho enterite pseudomembranous izany, tokony hajanona avy hatrany ny fanafody, ary tokony hampiasaina ny antibiotika aorian'izay.
Vetivety dia simba amin'ny vahaolana gliokaozy asidra malemy, noho izany dia tokony hampiasaina ny fampidirana tsy miandany ho toy ny solvent.
Ampicillin dia afaka manentana ny metabolisma estrogen na mampihena ny fivezivezena enterohepatic, ary mampihena ny fahombiazan'ny fanabeazana aizana am-bava.
3. Fifandraisana Ampicillin
Atambatra amin'ny probenecid, aspirine, indomethacin ary zava-mahadomelina sulfa, afaka mampihena ny fivoahan'ny penisilinina fanafody, mampitombo ny fitanana ra ny penicillins, ary mampitombo ny vokany sy ny poizina.
Ampiasao miaraka tetracyclines, erythromycine, chloramphenicol ary sulfonamides ary ny fanafody anti-bakteria hafa dia mety hampihena ny vokatry ny bakteria an'ity vokatra ity.
Ny fampiharana ampicillin sy chloramphenicol mitambatra dia misy fiatraikany samy hafa amin'ny vokatry ny bakteria amin'ny gripa grill in vitro. Chloramphenicol dia tsy manana antagonism amin'ny ampicillin amin'ny fifantohana avo (5 ～ 10 mg / L). Amin'ny fifantohana ambany (1 ～ 2 mg / L), dia mety hampihena ny vokatry ny bakteria amin'ny ampicillin izy io, nefa tsy misy akony amin'ny chloramphenicol. Ary rehefa ampiasaina amin'ny fitsaboana meningite bakteria ireo zava-mahadomelina roa ireo, ny fisehoan'ny seza maharitra dia avo kokoa noho ny ampiasaina irery.
Ny fampifangaroana amin'ny warfarin dia afaka manatsara ny vokatra anticoagulant.
Kanamycin dia afaka manatsara ny vokarin'ny bakteria in vitro an'ny ampicillin amin'ny Escherichia coli, Proteus ary Enterobacter.
Gentamicin afaka manatsara ny vokatry ny bakteria amin'ny vitika ampicillin amin'ny vondrona B streptococci.
Ampicillin dia antibiotika beta lactam. Noheverina ho iray amin'ireo zava-mahadomelina tena ilaina amin'ny rafitry ny fahasalamam-bahoaka izy io tamin'ny taona 1960, ary tamin'ny 2017 dia voatanisa ho iray amin'ireo karsinogen telo an'ny World Health Organization. Noho izany dia mila mitandrina rehefa mampihatra fanafody toy izany.
BALLYA manome a fitsapana-ballya-ampicillin holazaina aminao raha misy residues ampicillin amin'ny sakafo na sakafo.